Dowlada Canada oo si lama filaan ah kaga Laabatay Aabe Soomaaliyed oo ay Masaafurin rabtay. – Xeernews24
Dowlada Canada oo si lama filaan ah kaga Laabatay Aabe Soomaaliyed oo ay Masaafurin rabtay.
5. Juni 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Jaalliyadda Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa soo dhawweeyey go’aan ay Hay’adda Socdaalka ee dalka Kanada ku sheegtay inaan la masaafurin doonin Muwaaadin Soomaali oo la filayey in shalay dib loogu soo celiyo Kenya.
Muwaadinkaasi oo lagu magacaabo Yuusuf Maadeey Maxamed ayaa la qorsheynayey in Kenya loo soo masaafuriyo 5-tii Glaabnimo ee shalay ee Xilliga Kanada, balse waxaa la shaaciyey in loo oggolaaday inuu Kanada sii joogi karo muddo hal sanno oo kale.
Yuusuf Maadeey oo 41-jir ah waxa uu aad u soo dhaweeyey Go’aankaasi, isagoo sheegay inuu ka badbaaday Khatar uu kala kulmi lahaa Kenya haddii loo masaafurin lahaa.
Waxa uu u sheegay Wargeyska StarMetro ayaa sheegay inay noloshiisa khatar geli lahayd haddii lagu celin lahaa Kanada.
“Markii aan maqlay in la ii oggolaaday inaan sii joogo Kanada, waxaan daremay Farxad aan la soo koobi karin, waan ilmeeyey oo ilintayda waxay wada qoysay Shaarkayga” ayuu sii raaciyey.
Yuusuf Maadeey waxa uu Kanada soo galay sannadkii 2013-kii isagoo isticmaalayey Baasaboor Kenyan macmal oo uu ku qornaa magaca Faarax Maxamed C/llaahi.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/06/YUSUF-MADEY-750x430-180x135.jpg 135 180 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-06-05 10:47:182018-06-05 10:47:18Dowlada Canada oo si lama filaan ah kaga Laabatay Aabe Soomaaliyed oo ay Masaafurin rabtay.
Daawo; Gudoomiyaha Ururka Dulmi diid oo ka waramaya isku day Dil iyo Afduub... Xubnaha Sool iyo Sanaag ku matala Dowlada Federaalka oo ku kala aragti duwan...